Mayelana nokuqala ukusebenza kwe-TPAN - The World March
Ikhaya » Izaziso » Ezokuxhumana Okusemthethweni » Mayelana nokuqala ukusebenza kwe-TPAN
Mayelana nokuqala ukusebenza kwe-TPAN
Imemezelo ngokuqala ukusebenza kweSivumelwano Sokuvinjelwa Kwezikhali Zenuzi (TPAN)
Imemezelo ngokuqala kweSivumelwano Sokuvinjelwa Kwezikhali Zenuzi (TPAN) kanye nesikhumbuzo seminyaka engama-75 seSinqumo 1[i] loMkhandlu Wezokuphepha we-UN
Sibhekene "nesiqalo sokuqedwa kwezikhali zenuzi."
NgoJanuwari 22, i- Isivumelwano Sokuvinjelwa Kwezikhali Zenuzi (TPAN). Izovimbela ngqo amaqembu aseMelika ukuthi athuthukise, avivinye, akhiqize, akhiqize, akhiqize, athole, aphathe, athumele, asebenzise noma asongele ukusebenzisa izikhali zenuzi nokusiza noma ukukhuthaza izenzo ezinjalo. Izozama ukuqinisa umthetho okhona wamazwe omhlaba ophoqa zonke izifundazwe ukuthi zingavivinyi, zisebenzise noma zisongele ukusetshenziswa kwezikhali zenuzi.
para Umhlaba ngaphandle kwezimpi nodlame Kuyimbangela yokubungaza ngoba kusukela manje kuqhubeke kuzoba khona ithuluzi elisemthethweni enkundleni yomhlaba wonke elicacisa izifiso esekuphele amashumi eminyaka zisitshekelwe izakhamuzi eziningi zeplanethi emazweni amaningi.
Esethulweni se-TPAN, kugqamiswa ubungozi obudalwa ukuba khona kwezikhali zenuzi kanye nemiphumela eyinhlekelele yokusizwa kwabantu engabangelwa ukusetshenziswa kwazo. Izizwe eziqinisekise lesi Sivumelwano kanye nalezo ezivumile ziveza le ngozi futhi ngenxa yalokho zibonise ukuzibophezela kwazo emhlabeni ongenazo izikhali zenuzi.
Kulesi siqalo esihle nesinomdlandla manje kufanele sengeze ukuthi amazwe aqinisekisayo athuthukisa futhi agunyaze umthetho wokusebenzisa umoya wesivumelwano: kubandakanya ukuvinjelwa kokuhamba nokuxhaswa kwezikhali zenuzi. Ukuvimbela kuphela ukuxhaswa kwalo ngezimali, ukuqeda ukutshalwa kwezimali embonini yalo, kungaba nenani eliphezulu elingokomfanekiso futhi elisebenzayo, elibaluleke kakhulu emjahweni wezikhali zenuzi.
Manje indlela ibekiwe futhi siyethemba ukuthi inani lamazwe asekela i-TPAN lizokhuphuka ngokungena okunganqandeki. Izikhali zenuzi azisekho uphawu lokuthuthuka kwezobuchwepheshe namandla, manje seziwuphawu lwengcindezelo nobungozi besintu, okokuqala, kwizakhamizi zamazwe uqobo ngezikhali zenuzi. Ngoba izikhali zenuzi "eziyizitha" zibhekiswe ngaphezu kwakho konke emadolobheni amakhulu amazwe anazo, hhayi kulawo angenazo.
I-TPAN itholakale ngenxa yeminyaka engu-XNUMX yokulwa nokulwa nezikhali zenuzi okwenziwe ngumphakathi selokhu amabhomu enuzi aseHiroshima naseNagasaki akhombisa umthelela wabo oyinhlekelele wobuntu. Kube amaqembu, izinhlangano kanye nezinkundla, ngokusekelwa yizimeya, amalungu ephalamende nohulumeni abaziswe ngalolu daba abelokhu beqhubeka nokulwa kule minyaka kuze kube manje.
Kuyo yonke le minyaka, kuthathwe izinyathelo ezibalulekile ezinjengalezi: izivumelwano zokuvimbela izivivinyo zenuzi, ukwehliswa kwenani lezikhali zenuzi, ukungasabalali okwandisiwe kwezikhali zenuzi kanye nokuvinjelwa kwazo emazweni angaphezu kwe-110 ngezindawo ezingenazo izikhali . nuclear (Izivumelwano ze: Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok, Pelindaba, Central Asia Nuclear Weapon-Free, Mongolia's Nuclear-Weapon-Free, Antarctic, OuterSpace and Sea Bed).
Ngasikhathi sinye, ayimisanga umjaho wezikhali zenuzi ngamandla amakhulu.
Umbono wokuvimbela wehlulekile ngoba yize uvimbele ukusetshenziswa kwawo ezingxabanweni ezihlomile, iwashi le-apocalypse le-athomu (i-DoomsdayClock eliqondiswe ososayensi nabathola izindondo zeNobel) likhombisa ukuthi sikude ngemizuzwana eyi-100 nombango we-athomu. Ithuba landa unyaka nonyaka ukuthi izikhali zenuzi zizosetshenziswa ngengozi, ukubhebhetheka kwezingxabano, ukubala ngendlela engeyiyo noma ngenhloso enonya. Le nketho kungenzeka uma nje izikhali zikhona futhi ziyingxenye yezinqubomgomo zokuphepha.
Amazwe ezikhali zenuzi ekugcineni kuzofanele amukele izibopho zawo zokuthola ukuphucwa izikhali zenuzi. Kulokhu bavumelana esinqumweni sokuqala seZizwe Ezihlangene, Isixazululo se-United Nations General Assembly, esamukelwa ngoJanuwari 24, 1946 ngokuvumelana. Futhi ku-athikili VI weSivumelwano Sokungasabalali bazibophezele ekusebenzeleni izikhali zenuzi njengamaState Parties. Ngaphezu kwalokho, zonke izifundazwe ziboshwe yimithetho nezivumelwano zamazwe omhlaba ezijwayele ukwenziwa ezivimbela ukwesatshiswa noma ukusetshenziswa kwezikhali zenuzi, njengoba kwaqinisekiswa yiNkantolo Yomhlaba Yezobulungiswa ngo-1996 kanye neKomidi Lamalungelo Abantu le-UN ngo-2018.
Ukuqala ukusebenza kwe-TPAN kanye nesikhumbuzo seminyaka engama-75 seSinqumo soMkhandlu Wezokuphepha, ezinsukwini ezimbili kamuva, kunikeza ithuba elifanele lokukhumbuza zonke izifundazwe ngokungabi semthethweni kosongo noma ukusetshenziswa kwezikhali zenuzi kanye nezibopho zazo zokuphepha. donsela ukunaka okuhlobene nokukusebenzisa ngokushesha.
NgoJanuwari 23, ngosuku olulandelayo ngemuva kokusebenza kwe-TPAN, inhlangano ye-MSGySV yomlingani womkhankaso wamazwe omhlaba i-ICAN izokwenza Isiko ICyberfestival para celebrar "Isinyathelo esihle esintwini”. Kuzoba uhambo lwamahora angaphezu kwama-4 ngokusebenzisa amanye amakhonsathi, izitatimende, imisebenzi edlule neyamanje, nabaculi nezishoshovu ezilwa nezikhali zenuzi kanye nokuthula emhlabeni.
Isikhathi sokuqeda inkathi yezikhali zenuzi!
Ikusasa lesintu lizokwenzeka kuphela ngaphandle kwezikhali zenuzi!
[i]Kuzomiswa iKomidi Lezabasebenzi Jikelele elizokweluleka futhi lisize uMkhandlu Wezokuphepha kuzo zonke izindaba eziphathelene nezidingo zamasosha oMkhandlu ukuze kugcinwe ukuthula nokuphepha kwamazwe omhlaba, ukuqashwa kanye nomyalo wamabutho abanawo, ngokulawulwa izikhali kanye nokuphucwa izikhali.
Iqembu Lokuxhumanisa Lomhlaba Lomhlaba Ngaphandle Kwezimpi Nodlame
Izigaba Ezokuxhumana Okusemthethweni Ukuhamba kwethekithi
Ngakusasa ngaphandle kwezikhali zenuzi